Nzube na-anabata: Nhọrọ kachasị mma maka weebụsaịtị webụsaịtị ọtụtụ ECommerce ozi ọma
Nzube Na-azaghachi: Nhọrọ kachasị mma maka ebe nrụọrụ weebụ ọtụtụ ngwaọrụ
Claudi ego | | eCommerce, SEO
A na-akpọkwa ihe mmeghachi omume, nhazi mgbanwe, ma ọ bụ mmeghachi omume. Nzaghachi na-emegharị agbanwe gbanwee ọdịdị nke weebụsaịtị iji gbanwee ya na ngwaọrụ nke esi na ibe ya gaa. N'ụzọ dị otú a, ahụmịhe onye ọrụ na-emewanye nke ọma, ọ bụkwa otu n'ime SEO kachasị mma nke Google na-ebuli elu. N’iburu n’uche na kemgbe 2015, ọ gbanwere algorithm ya iji kwụọ ndị weebụsaịtị ahụ mere ụgwọ.
Ma mmeghachi omume na-eme ihe karịrị nanị ngosipụta nke ngwaọrụ ọ bụla. Ọ na-enye anyị ohere nke imezi ihe ahụ (na-enweghị ịme ya) ma jiri obi anyị niile gbanwee ya na ngwaọrụ ọ bụla. Iji bulie SEO anyị, yana na webụsaịtị anyị anaghị ewepụ ndị ọzọ na-etinye ya. Na njedebe, ha niile na-agbakwụnye, taa anyị ga-ekwu maka atụmatụ azịza.
1 Design na-anabata
1.1 Etu ị ga-esi gbanwee weebụsaịtị ka ọ bụrụ mmeghachi omume
2 Gini mere Google ji choro imebe ihe?
2.1 Mkpa nke imewe mgbanwe
Ọ bụ nnoo mmegharị nke weebụsaịtị na ụdị ngwaọrụ ọ bụla iji jikọọ. N'oge gara aga, ịntanetị nwere ike ịnweta site na desktọọpụ ma ọ bụ kọmputa laptọọpụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ike ịchọta njikọ site na ekwentị mkpanaaka (nke kachasị), mbadamba, akwụkwọ elektrọnik, wdg. Mmetụta izizi nke achọpụtara ma ọ bụrụ na enweghị mmebe weebụ, ọ bụ ụdị ọdịda dị njọ, ụdị adịghị mma, ma ọ bụ na ngwaọrụ anaghị akwado ụfọdụ visualizations. Nke a bụ n'ihi ihuenyo, ndị nhazi ha na-ebu, sistemụ arụmọrụ, mkpebi ma ọ bụ ebe nchekwa dị iche na ngwaọrụ ọ bụla.
N'ihi ụdị ụdị a, site na otu HTML na CSS ọ ga-ekwe omume idozi ma dozie nsogbu niile gara aga, nke dịka ọmụmaatụ na-ewu ewu n'etiti atụmatụ obosara. Ihe bụ ihe ọzọ, mkpa ọ dị idobe weebụsaịtị ọ bụla dị n'otu n'otu ebe. Ga-enweta nsonaazụ kachasị mma na nsonaazụ kachasị mma, yana ịrụ ọrụ dị ala karị.
Etu ị ga-esi gbanwee weebụsaịtị ka ọ bụrụ mmeghachi omume
Have nwere ụzọ dị iche iche iji nweta ya. O doro anya na ikpe kachasị mma bụ ma ọ bụrụ na ịmalite site na 0, mana anyị ga-edepụta ha.
Mepụta ụdị mkpanaka. Dị oké mkpa na mgbe ahụ anyị ga-ekwu banyere ya. Nke a bụ ụzọ kachasị "cumbersome", mana ị ga - enweta otu elele ahụ (ya na obere ọrụ). Site n'inwe obere desktọọpụ dị ala, na nhọrọ nke ihe oyiyi ka mma, ị nwere ike melite ọsọ nke saịtị gị. Ọ bụrụ na iji ọmụmaatụ were WordPress, ịnwere ike iji ngwa mgbakwunye, nke kachasị ọnụ ala ma dịkwa ọsọ. Dịka ọmụmaatụ, ya wptouch pro.
Jiri ndebe azịza izizi ozi. N'ihe banyere WordPress na usoro nchịkwa ọdịnaya ndị ọzọ (CMS) dị ka Joomla, ha n'ozuzu ha nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndebiri ha niile nwere nhazi nzaghachi taa.
Budata ndebiri nnabata. Ihe kachasị mma n'ime okwu ndị a bụ na ha jikwaa ịchọpụta nha ihuenyo nke ngwaọrụ ọ bụla ma gbanwee ọdịnaya ya. N'ezie, ị ga-eburu n'uche na ụdị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ị na-enye ga-adọrọ mmasị karịa nke ọzọ. Ihe ndebiri maka blog abụghị otu ihe maka nke ọzọ maka kichin ọkọnọ kichin.
Gini mere Google ji choro imebe ihe?
Google bụ taa nguzozi zuru oke n'etiti arụmọrụ na ogo, nke sụgharịrị ịbụ arụmọrụ. Eziokwu nke inwe web agbanwe agbanwe na-enye ohere Google 2 ihe. N'otu aka, na-enye onyinye na igwe nyocha ha ebe na-eche maka ịkasị nkasi obi nye ndị ọrụ ha, na aka nke ọzọ ịkọwa naanị otu ebe.
Mgbe ụfọdụ, ọ dị mfe ịhọrọ imewe maka kọmputa, ma ọ bụ ọbụna mepụta mkpokọta mkpanaka ma tinye mgbalị niile ebe ahụ. Ma ọ bụ mmeghe. Ọrụ a na-arụ bụ okpukpu abụọ, ọ bụghị naanị maka ịmeghachi usoro ahụ ugboro abụọ ma ọ bụ karịa, kamakwa maka ịnwa ịbawanye ebe nrụọrụ weebụ ugboro abụọ. N'okwu a, ihe kachasị aga nke ọma bụ ịdabere na nzaghachi na-anabata, nke na-enye anyị ohere njikọ na visibiliti site na ngwaọrụ ọ bụla site na ịkọwapụta otu weebụsaịtị.
Algọridim a emetụtaghị nchọta kọmputa, ma ebe ọ bụ na 2016, ọtụtụ nyocha adịghịzi eme ha. Ihe dị mkpa ịtụle, ọ bụrụ na ịchọrọ visibiliti na net.
Mkpa nke imewe mgbanwe
Ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ịbanye na weebụsaịtị gị wee tụfuo ha n'otu ntabi anya. Inwe ebe nrụọrụ weebụ na-ahazi nke ọma adịghị mma, ma ọ bụrụ na ịnweghị mmeghachi omume na-anabata ya, ọ nwere ike iwepụta nsogbu ndị a. Dịka ọmụmaatụ, site na anya nke ngwaọrụ mkpanaka, nke a na-ejikarị eme ihe kwa ụbọchị.
Ma ị na-eche ... Ọ dịghị ihe na-eme, profaịlụ ọrụ m maka ọrụ m na-enye nwere mmasị ilele PC anya! O doro gị anya? Naanị ihe enwetara bụ inweta ọnụego dị elu. Ma ma ọ bụ n'ihi na ọdịnaya gị adịghị mma, ma ọ bụ enwere nsogbu nhazi na weebụsaịtị gị, wdg, engines ọchụchọ nwere ike ịkọwa nke ahụ dịka akara ọjọọ. Karịsịa n'ihi na n'ikpeazụ, ndị mmadụ na-etinye obere oge na weebụsaịtị gị. Yabụ, na nke ahụ, enwere ike imetụta ọnọdụ gị, malite ibelata ọnọdụ gị. Kedu ụzọ, Ọ bụghị na ọ bụ echiche ọjọọ ịmegharị weebụsaịtị gị na ọtụtụ ngwaọrụ, mana ọ dị mkpa. N'ihi ya mkpa ọ nwere.
Enwere m olileanya na ị hụla mkpa ọ dị ịnwe weebụsaịtị, yana ọ bụrụ na ịnweghị ya, gaa maka ya! Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa iji tụlee taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Nzube Na-azaghachi: Nhọrọ kachasị mma maka ebe nrụọrụ weebụ ọtụtụ ngwaọrụ
Ndụmọdụ ndị bụ isi maka ịkọwa data Google Analytics
Kedu uru na ọghọm nke eCommerce?